भेरीमा दलितको लाससँगै देशको कानुन र मानवीय संवेदना पनि बग्यो — Breaking News, Headlines & Multimedia
आज : २०७८ कार्तिक २ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
भेरीमा दलितको लाससँगै देशको कानुन र मानवीय संवेदना पनि बग्यो
गैरदलित समुदायको चेतनामाथि प्रश्न
कोरपाटी संवाददाताजेठ १३, २०७७काठमाडौं
नेपालको कानुनले प्रत्येक व्यक्तिको मानवीय मर्यादा मात्र होइन, विवाह गर्ने र बरवधु छान्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ, तर पश्चिम रुकुममा कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकालाई बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका युवाको समूहलाई ढुंगामुढा गरेर लखेटियो, ज्यान बचाउन भेरीमा हामफालेका तीनजनाको शव भेटियो, तीन अझै बेपत्ता
भेरी नदी जहाँ प्रेम बिलायो :
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८ सोती क्षेत्रमा बगिरहेको भेरी नदी जहाँ स्थानीयले आक्रमण गरेपछि ११ युवा हामफालेका थिए । पाँचजना नदी तरेर जाजरकोट पुगे, ६ बेपत्ता भए ।
आफन्तको खोजीमा आफन्त :
बेपत्ता युवालाई दिनभरि खोजेर साँझपख घर फर्कंदै गरेका गाउँले । सोमबार साँझसम्म तीनजनाको शव भेटिएको छ, तीन अझै बेपत्ता छन् ।
नेपालको कानुनले जातीय आधारमा छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध भनेको ५७ वर्ष भएको छ । मुलुकी ऐन, २०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछूतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार मानवीय मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति देशको कानुनले गरेको छ । तर, अन्तरजातीय प्रेम बिहे गर्न जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुम आएका युवा र उनको लास मात्र होइन, मानवीय संवेदना पनि भेरी नदीमा बगेको छ ।
गाउँलेले ढुंगामुढा गरेर लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हामफालेका तीनजनाको शव फेला परेको छ, तीन अझै बेपत्ता छन् । रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८, सोतीमा कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेमबिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका दलित युवा र उनका साथीहरूको समूहलाई स्थानीयले अन्धाधुन्द आक्रमण गरेका थिए । नदीमा हामफाले पनि गाउँलेले ढुंगा प्रहार गरेपछि साथीहरू डुबेको उनका साथीहरूले बताएका छन् ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– ४, रानागाउँनिवासी २१ वर्षीय नवराज विक प्रेमिकासँग बिहे गर्न १९ जना साथीसहित शनिबार अपराह्न करिब ५ बजे रुकुमको चौरजहारी पुगेका थिए । तर, स्थानीयले संगठित आक्रमण गरेपछि भाग्दाभाग्दै उनीहरू नदीमा हामफालेका ६ जना बेपत्ता भएका थिए ।
सोमबार साँझसम्म नवराज तथा उनका साथीहरू गणेश बुढामगर र टीकाराम नेपालीको शव भेटिएको रुकुमका डिएसपी ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् । नवराजका साथीहरूमध्ये गणेश जाजरकोटका हुन् भने टीकाराम रुकुम चौरजहारीकै हुन् ।
त्यस्तै, भेरी नगरपालिकाका–४ का १८ वर्षे सञ्जु विक, १७ वर्षे गोविन्द शाही र १८ वर्षे लोकेन्द्र सुनार अझै बेपत्ता छन् । शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल जाजरकोट पुर्‍याइएको र बेपत्ताको खोजीकार्य भइरहेको जाजरकोटका डिएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– ४ रानागाउँनिवासी नवराज विक एथलेटिक्सका प्रतिभावान् खेलाडी थिए । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका उनी खेल खेल्नकै लागि मेला–महोत्सवमा वारि–पारि कुदिरहन्थे । त्यही क्रममा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८, सोतीकी एक युवतीसँग तीन वर्षअघि चिनजान भयो । उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो ।
खेलकै क्रममा रुकुम पुग्दा नवराजले लुकिछिपी प्रेमिकालाई पनि भेट्थे । प्रेमिका पनि नवराजको घर आउने गर्थिन् । दलित युवासँग प्रेम सम्बन्ध छुटाउन आफन्तले निकै प्रयास गरे । योबीचमा अभिभावकले छोरीलाई कुटपिट पनि गरेका थिए । तर, उनीहरू एक–अर्कालाई छाड्न तयार भएनन् ।
प्रेमिकालाई लिन केही महिनाअघि पनि नवराज साथीहरू लिएर सोती पुगेका थिए । त्यतिवेला प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । तर, दलितसँग प्रेम गरेको भनेर आफूमाथि परिवारबाटै अवहेलना भएको भन्दै प्रेमिकाले नवराजलाई सन्देश पठाएकी थिइन् । ‘लिन आउनु भनेर प्रेमिकाले सन्देश पठाएकी छिन् भनेपछि हामी नवराजसँग गएका हौँ,’ घटनामा परेका एक युवकले भने ।
१८ जना साथीसहित भेरी तरेर नवराज शनिबार अपराह्न सोती पुगेका थिए । नवराजले छोरी लग्न थालेको थाहा पाएपछि प्रेमिकाकी आमाले गाउँमा हारगुहार गरिन् । प्रेमिकासम्म पुग्न नपाउँदै नवराजको समूह गाउँलेबाट घेरिएको थियो ।
‘हामीलाई देख्नेबित्तिकै आमैले जातिवाचक गाली गर्न थाल्नुभयो, कुटाइ नपुगेर फेरि आएछन् भन्दै मान्छे जम्मा गर्न थाल्नुभयो,’ नवराजका साथी आशिष विकले भने, ‘गाली सुन्न नसकेर हामी अलिक तल बाटोमा झ¥यौँ । एकैछिनमा ढुंगामुढा सुरु भइहाल्यो ।’
हातमा लाठी तथा घरेलु हतियार बोकेका गाउँलेले ढुंगाले हान्न थालेपछि आफूहरू भागेको आशिषले बताए । ‘हामी जति भागे पनि गाउँलेहरू पछिपछि आए, गाउँदेखि चार किलोमिटर बगरैबगर हामी भाग्यौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो भवितव्य आइलाग्यो, ज्यान बचाउन कोही कता भागे, कोही कता, साँझको वेला पत्तै भएन, आत्तिएका साथीहरू खोलामा हामफाले ।’
प्रहरीका अनुसार नवराजले १९ जनाको समूह बनाए पनि एकजना बाटोबाट फर्किएका थिए । सोती पुगेका १८ जनामध्ये ११ जना खोलामा हामफालेको इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका प्रहरी निरीक्षक धर्म विष्टले बताए । ‘पाँचजना पारि पुगे, ६ जना खोलामै हराए । हराएकामध्ये तीनजनाको शव भेटिएको छ भने तीनजनाको अवस्था अज्ञात छ । सातजना भने खोलामा नपसी लुकेका थिए,’ विष्टले भने । अरू भागे पनि नवराजलाई गाउँलेले पक्रेर कुटेको उनका साथी आशिषले बताए । ‘नवराजलाई त उनीहरूले कुटे, मारेर भेरीमा फालेका हुन्,’ उनले भने । नवराजको शव शनिबार राति १० बजे भेरी किनारमा भेटिएको थियो ।
घटनास्थल पुगेका सुर्खेतका पत्रकार खगेन्द्र सुनार भन्छन्, ‘नवराजको शरीरभरि हेरिनसक्नु घाउ नै घाउ छ, टाउको र मुखमा ढुंगैढुंगाले हानेर हत्या गरेको देखिन्छ । नदीमा त मारेर फालिएको मात्रै हो, पानी खाएको छैन ।’ बेपत्ता भएका चौरजहारी नगरपालिकाकै टीकाराम नेपालीको शव भने आइतबार अपराह्न घटनास्थलबाट करिब ३० किमि तल भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै भेरी नगरपालिका–४ का गणेश बुढामगरको शव भने सोमबार दिउँसो ३ बजे मात्रै भेटिएको छ । गाउँलेको कुटाइबाट घाइते भएका सुदीप खड्काको अवस्था उपचारपछि सामान्य छ । उनीहरूमध्ये धेरै जाजरकोटका र केही भने रुकुम, सल्यान र बाँकेका रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
वडाध्यक्षसहित १२ जना पक्राउ
गाउँमा झडप भएको भन्दै वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले प्रहरीलाई फोन गरेका थिए । तर, उनले आफ्नो गाउँकी युवती लिन आएका युवाहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा गाउँलेलाई उक्साएर ढुंगामुढा गराएको आरोप छ । वडाध्यक्षको फोनपछि साँझ साढे ६ बजे घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको थियो । खोला नतरी लुकेका युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
घटनामा संलग्न चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुरसहित १२ जनालाई रुकुम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले आइतबार सातजना र सोमबार थप पाँचजना गरी १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका प्रहरी निरीक्षक धर्म विष्टका अनुसार वडाध्यक्ष, प्रेमिका, बुबाआमासहित १२ जना नियन्त्रणमा छन् ।
पक्राउ परेका सबैलाई सोमबार राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम पुर्‍याइएको डिएसपी ठगबहादुर केसीले बताए । ‘प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेकोे छ, यथार्थ बाहिर आउँछ, दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनेमा शंका छैन,’ उनले भने ।
डिएसपी केसी भन्छन्, ‘केटा र केटीकै सहमतिमा भागेर विवाह गर्ने योजना बनेको देखिन्छ, सोहीअनुसार पारिबाट युवा आएको र त्यो थाहा पाएपछि गाउँलेले उनीहरूलाई लखेटेको बुझिन आएको छ ।’
उता सोती गाउँका स्थानीयले भने आफूहरूले आक्रमण नगरेको दाबी गरेका छन् । लकडाउनका वेला ठूलो समूहमा अपरिचित युवाहरू आएको देखेपछि बुझ्न खोज्दा उनीहरूको भागाभाग भएको स्थानीयले बताए । ‘गाउँमा धेरै युवा आएका रहेछन्, लकडाउनका वेला किन आएको भनेर बुझ्न खोज्दा भागाभागको अवस्था सिर्जना भयो, यसमा जातीय कुरा जोडिएको छैन,’ उनीहरूको भनाइ छ । तर, बुझ्न खोज्दा भागाभाग किन भयो, मान्छेहरू ज्यान जोगाउन नदीमा हामफाल्ने स्थिति कसरी आयो भन्ने मात्र होइन, नवराजको टाउकोमा चोटैचोट कसरी लाग्यो भन्ने अनुसन्धानको विषय छ ।
तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा घटनालाई तोडमोड गर्न खोजिएको भन्दै पीडितले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । सोमबारसम्म कसैको पनि शव आफन्तले बुझेका छैनन् । सोमबार पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा धर्ना दिएका छन् । पीडितले मुद्दासमेत जाजरकोटमै चलाउन माग गरेका छन् ।
नवराजका बुबा मोहनलाल नेपाली भन्छन्, ‘पुलिसमा भर्ती भएर कानुनको सेवा गर्छु भन्थ्यो, उसैलाई भिडले कुटेर मार्यो ’
तीन छोरी, एक छोरासहित हामी बुढाबुढी थियौँ । छोरीहरूको बिहे भइसक्यो । नवराज राम्रो खेलाडी थियो, पढाइमा पनि राम्रो थियो । तर, गरिबीले गर्दा न उसलाई खेलकुदमा तालिम गराउन सकियो, न पढ्न बाहिर पठाउन सकियो । पढ्न छाडेर घरधन्दा, मेलापात र बनिबुतो गरेर घर चलाउन थालेको थियो ।घरमा काम गर्न थाले पनि अगाडि बढ्ने सपना छोडेको थिएन । प्रहरीको लिखितमा पास गरेको थियो । अन्तर्वार्ता पनि पास गर्छु, प्रहरीको युनिफर्म लगाएर परिवार र देशको सेवा गर्छु भन्थ्यो ।
उसलाई भेट्न एउटी नानी आउँथिन् । ‘माथिल्लो जात’की हुन् भन्ने थाहा पाएपछि मैले ए बाबु ‘विष्ट’सँग बिहे गर्ने कोसिस नगर भनेर सम्झाएको थिएँ । तर, अहिलेको जमानामा पनि जातपातको कुरा हुन्छ ? रगत सबैको रातो हुन्छ, मान्छेमान्छे एउटै हो भनेर उल्टै मलाई नै सम्झाउन खोज्थ्यो । केटीले नमाने आफ्नै जातकोलाई पनि बिहे गर्नु हुँदैन, केटी खुसी भए जुन जातको भए पनि फरक पर्र्दैन भनेर तर्क गथ्र्यो ।
केटीले नै फोन गरेर बोलाएपछि साथीहरू मिलेर गएका हुन् । गाउँबाट शनिबार दिउँसो १२ बजे हिँडेका थिए । कतिवेला पुगे ? बुहारी लिएर आउँछु भन्दै गएको थियो, तर ऊ आफैँ आउन पाएन ।
दोषीहरू कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् : डिआइजी वसन्त पन्त, कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख
यो अत्यन्तै गम्भीर घटना हो । मानवले अनुमान गर्नेभन्दा बर्बर घटना भएको छ । संदिग्धहरू पक्राउ परेका छन्, अरूको पनि खोजी भइरहेको छ । जो दोषी छन् उनीहरू सबैलाई कारबाही हुन्छ, कसैले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरेरै छाडिन्छ ।
संसदीय समितिले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण
संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले रुकुममा भएको जातीय विभेदमा आधारित सामूहिक हत्या घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले घटनाका विषयमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग
कर्णाली प्रदेश सभामा अन्तरजातीय बिहेको विषयलाई लिएर रुकुम पश्चिममा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सदस्यहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारसंँग माग गरेका हुन् । प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपालीले रुकुम घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन अविलम्ब गर्न माग गरिन् । घटना भएको तीन दिन बितिसक्दा बेपत्ताहरूको खोजीमा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।
रुकुम पश्चिम क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य रातो कामीले तत्काल संसदीय समिति गठनको माग गरे । ‘दुलही लिन पुगेका अझै बेपत्ता भएकाले खोजीकार्यमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘पीडित परिवारलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गराउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’ प्रेम प्रसंग र अन्तरजातीय बिहेकै कारण घटना भएकाले यसबाहेक अन्य कुनै कारण नभएको उनकोे भनाइ थियो । प्रदेश सभा सदस्यहरू पद्मा खड्का, बद्मी क्वारी बोहरा, कौशिलावती खत्री, दानसिंह परियार, गणेशप्रसाद सिंहलगायतले घटनाको निन्दा गरे ।
के छ कानुनमा ?
नेपालका कानुनले जातीय आधारमा छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध गरेको ५७ वर्ष भएको छ । मुलुकी ऐन ०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको छ । कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछूतको व्यवहार हुनेछैन भनेर संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने प्रेम गर्ने युवायुवतीले दुव्र्यवहार सहनुपर्ने मात्र होइन, ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।
छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारमा विवाह गर्ने तथा बरवधु छान्ने अधिकार सुरक्षित छ । कसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उमेर पुगेका बरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाए छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिन्छ ।
मुलकी ऐन, २०२० ले नै जातकै आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी, पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अन्तर्जातीय बिहे गर्ने युवाको लास चार वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा, अत्याचारको शृंखलामा अरू दलित पनि
काभ्रे पाँचखाल–६, होक्सेका दलित युवा अजित मिजार स्थानीय सर्वमंगल उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत थिए । स्थानीय एक युवतीसँग उनको प्रेम गाँसियो । दुई वर्षको प्रेमलाई उनीहरूले २५ असार ०७३ मा बिहेमा बदले । तर, समाजको डरले उनीहरू अजितकी दिदीको भक्तपुरस्थित घरमा बस्न थाले ।
बिहेको दुई दिनपछि युवतीले ‘माइती’लाई जानकारी दिएकी थिइन् । तर, माइती पक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएको अजितको परिवारको दाबी छ । त्यसपछि प्रहरीकै रोहवरमा सम्बन्धविच्छेद गराइयो । २८ असारमा सम्बन्धविच्छेद भयो । अर्को दिन अजित बेपत्ता भए ।
दिउँसो १ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका उनले राति ८ बजे घरमा फोन गरेका थिए । उनको स्वर अत्तालिएको थियो । त्यसपछि सम्पर्क हुन सकेन । छोरा हराएको भन्दै परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो । भोलिपल्ट ३० असारमा धादिङको कुलपुर गाविसको परेवाटारमा झुन्डिएको अवस्थामा एक युवक फेला परे । दुई दिनसम्म पनि मृतकको सनाखत हुन नसकेपछि पोस्टमार्टम गरेको भन्दै प्रहरीले धादिङमै लास गाडेको थियो ।
यसको जानकारी मिजार परिवारले पायो । शंका लागेर उनीहरू काभ्रेको पाँचखालबाट धादिङको परेवाटार पुगे । उनीहरू घटनास्थल पुग्दा लास गाडिसकिएको थियो । परिवारका सदस्यले खाल्डोबाट लास निकाले । लास अजितकै थियो । प्रहरीले पोस्टमार्टमसमेत गरेको भनेको थियो । तर, मृतकको शरीरमा कहीँ–कतै चिरफार गरेको भेटिएन । आफन्तले गाडिएको लास पुनः उत्खनन गरी काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल ल्याए । उनको लास अझै अस्पतालमा छ ।
अजित धादिङ जानुपर्ने कुनै कारण थिएन । उनलाई अरू कसैले त्यहाँ पुर्‍यायो र झुन्ड्यायो भन्ने आफन्तको दाबी छ । मिजार परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले युवतीका माइती पक्षका चारजनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालत धादिङले सुरुमा तारेखमा छाड्यो । पछि अभियुक्तहरूलाई सफाइ दियो ।
उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे पनि घटनामा प्रहरीकै मिलेमतोमा प्रमाण नष्ट गरिएकाले न्याय पाउन नसकेको परिवारको गुनासो छ । शवको चिरफार नै नगरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेख्ने डाक्टरले गल्ती स्विकारे पनि अदालतले पीडितलाई न्याय दिन हिच्किचाएको अधिवक्ता मोहन शाशंकर बताउँछन् । ‘सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी नै संलग्न भएर प्रमाण नष्ट गरिएको देखिन्छ, उत्खनन गरिएको शवको अनुहारको छाला जलेको थियो, एसिड प्रहार भएको हुन सक्ने हामीले आशंका गर्‍यौँ, तर अदालतले परीक्षण गर्न चासो दिएन,’ अधिवक्ता शाशंकर भन्छन्, ‘अझै पनि अदालतले चाह्यो भने घटनामा प्रमाणहरू जुटाउन सकिने ठाउँ छन् ।’
अजितका बुबा हरिभक्त भन्छन्, ‘मेरो छोरो झुन्डिएरै मर्ने भए गाडी चढेर धादिङ किन जानुपथ्र्यो र ?’ केटीका माइती परिवारले प्रहरीको सहयोगमा प्रमाणसमेत नष्ट हुने गरी जालझेल गरेर हत्यालाई आत्महत्या बनाउने कोसिस गरेको उनको आरोप छ ।
काभ्रेका युवालाई धादिङमा लगेर मारिएको र पोस्टमार्टम पनि नगरी हतारहतार गाडिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कुनै कारबाही नभएको भन्दै परिवार र नागरिक अधिकारकर्मीले न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही नभएकाले उनीहरूले शव बुझ्न मानेका छैनन् ।
हुँदै नभएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रहरीले कसको स्वार्थमा बनाएको थियो ? प्रहरीले दोषी उम्काउन यस्तो गरेको ठहर व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको थियो । गजुरी प्रहरी र गजुरी स्वास्थ्य चौकीले युवतीको माइती पक्षको परिवारको प्रलोभनमा परेर मिजारले आत्महत्या गरेको रिपोर्ट बनाएको ठहर उपसमितिले गरेको थियो । तर, यो विषय आफैँ अलपत्र परेको छ ।
जसले गैरदलितसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाए
कथित उपल्लो जातिसँग प्रेम गरेकै कारण अहिले नवराज विकले ज्यान गुमाएका छन् । चार वर्षअघि अजित मिजारको हालत यस्तै भएको थियो । तर, नवराज र अजितजस्ता युवाले प्रेमको मूल्य निरन्तर चुकाइरहेका छन् । जातीय विभेद र छुवाछूत दण्डनीय हुने व्यवस्था बनेपछि पनि अन्तरजातीय प्रेमकै कारण वर्षैपिच्छे दलित कुटिएका छन्, मारिएका छन् ।
गैरदलित युवतीसँग प्रेम सम्बन्धकै कारण ०६८ को भदौमा दैलेखका सेते दमाईं मारिए । त्यही वर्षको १६ माघमा भएको सप्तरीको पन्सेरा–३ का शिवशंकर दासको मृत्युको कारण पनि अन्तरजातीय प्रेम र विवाह नै थियो । आफूहरूको प्रेमले परिवार र समाजमा विवाहका रूप नपाउने भएपछि झापाका अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्टराईले ७ माघ, ०७३ मा एउटै पासो लगाए । तनहुँकी संगीता परियारले पनि गैरदलितसँग प्रेमविवाहकै कारण ज्यान गुमाएकी थिइन् ।
गैरदलित समुदायको चेतनामाथि प्रश्न : शिवहरि ज्ञवाली,सामाजिक अभियन्ता
चाैरजहारी घटनालाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, घटनामा सिंगो गाउँ नै संलग्न छ । यो कुनै दुई व्यक्तिबीचको सामान्य मनमुटावको परिणाम होइन । यो सामूहिक नरसंहार हो । दोस्रो, घटना भएको ठाउँ तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको ठूलो प्रभाव भएको र छुवाछूतमुक्त जिल्ला पनि हो । यसले स्वभावैले तत्कालीन माओवादीको दलितप्रतिको वैचारिक दृष्टिकोण निर्माणको आधार के थियो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । र, हामीले पछिल्लो दशकका राजनीतिक परिवर्तनहरूमार्फत बदलिँदो नेपाली समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दा यो घटनाले हाम्रो समाज आधारभूत रूपमा बदलिएकै हो त ? सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
यसअघि ०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाईंलाई गैरदलितहरूको समूहले खुकुरीले छातीमा हानेर हत्या गर्‍यो । त्यस घटनामा पनि सिंगो गाउँ नै दलित परिवारमाथि खनिएको थियो । ०६९ असारमा धादिङ पीडा– ५ मूलखर्कमा दलित युवकले सुवेदी थरकी युवतीसँग प्रेमविवाह गरेपछि गैरदलितहरूले सिंगो दलितबस्तीमाथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट दलितबस्ती नै विस्थापित भयो । ०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार पनि अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिए । उनको शव अझै शिक्षण अस्पतालमा छ । परिवारले हालसम्म न्याय पाएका छैनन् । केही अध्ययनहरूले ०६८ सालमा जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अन्तरजातीय विवाहकै कारण आत्महत्या र हत्याका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको देखाएका छन् । यसबीचमा २५ जना युवाले दलित समुदायकै भएका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
जनयुद्धको समयमा छुवाछूत गर्नेलाई जसरी माओवादी कार्यकर्ताले कारबाही गरे त्यसको डरले पनि कसैलाई दलितमाथि विभेद गर्ने आँट नआएको हुन सक्छ । जनयुद्धको पतनसँगै जनयुद्धमा सहभागी अधिकांश दलित अगुवाको हैसियत जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याइयो । पूर्वपञ्चहरू र उच्च जातकाहरूकै राज्यका हरेक तहमा उपस्थिति यथावत् रह्यो । जब जनयुद्ध पतनपछि गैरदलितमा डर र कानुनी बन्धनले दबाएको जातीय अतिवादी मानसिकता छताछुल्ल भएर आयो । यस्तो प्रवृत्ति सामूहिक रूपमा देखियो न कि व्यक्तिगत रूपमा । अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि समूहको वैचारिक प्रतिनिधित्व गरे, जहाँ न्यायपूर्ण तर्क र तथ्यहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । यो घटनामा पनि भएको त्यही हो ।
एकातिर राज्यसंरचनाको बलमा निश्चित समुदायलाई अछुत, अशुद्ध, हीन, अपवित्रको नाममा किनाराकृत बनाउने र अर्को तिनै वर्ण, जात र लिंगका मानिसका श्रम, सेवा र शरीर भोग्दै आफ्नो श्रेष्ठता, पवित्रता र शुद्धतामा गर्वबोध गर्ने । अहिले यो काम हिजोका क्रान्तिकारी भनिनेहरूकै नेतृत्वमा भइरहेको छ । जसरी धर्म, भूगोल र वर्णका आधारमा देशकै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यस्ता समुदायको बारम्बार अपमान गरिरहेका छन् त्यस्तो देशमा सदियौँदेखि जन्मिँदै विशेषाधिकार पाएको खलकले दलितहरूमाथि सहजै अत्याचार गर्ने वातावरण पाउँछ । अहिले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एउटै खलकको नेतृत्वमा चलेका छन् । समावेशीकरण र सहभागिता परिवारवादमा सीमित छ । नाजीहरूको नेतृत्व र हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति तात्विक रूपमा भिन्न छैन ।
यो घटनाले सिंगो गैरदलित समुदायमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो प्रश्न गैरदलित समुदायको चेतनामाथिको प्रश्न हो । यो प्रश्न गैरदलित समुदायमा मानवीय मूल्यमाथिको प्रश्न हो । यो प्रश्न गैरदलित समुदायमा सामाजिकीकरणको प्रश्न हो । र, यो प्रश्न हरेक गैरदलितले आफ्ना सन्तान र आफूलाई अपराधी बनाउने कि मानवीयकरण गर्ने भन्ने हो । हामी जति नै मौन बसे पनि चौरजहारी घटनाले वर्षौंसम्म पछ्याइरहनेछ । र, हामीले एकएक जवाफ आफ्ना सन्तानलाई दिँदै जानुपर्नेछ । एक दिन यस्तो अवस्था आउनेछ आफ्ना सन्तानको जवाफ दिन उनीहरूका अघि आफैँलाई अपराधी स्विकार्नुपर्नेछ ।
हेमन्त के. सी./जाजरकाेट